लोकसेवाले माग्यो पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरुको विवरण :-रोकिएका १८० परीक्षा, ३४ विज्ञापनको नतिजा कहिले ? - Ekarmachari
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०७:३७
लोकसेवाले माग्यो पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरुको विवरण :-रोकिएका १८० परीक्षा, ३४ विज्ञापनको नतिजा कहिले ?
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०७:३७ June 9, 2021
कोरोना कहरका कारण लामो समयदेखि रोकिएको छ लोकसेवा विज्ञापन । त्यही समयमा गत चैत्र १० देखि लोकसेवा आयोग पदाधिकारीबिहिन बनेसँगै वार्षिक कार्यपालिका प्रभावित बन्दै आएको छ ।
आयोगले एक सूचना निकालेर पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरुको विवरण पठाउन संगठन तथा सुरक्षा निकायसँग माग गरेको छ । आयोगले आर्थिक बर्ष ०७८/ ७९ भित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने रिक्त पदको विवरण आगामी असार १५ गतेभित्र पठाउने सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
यता आयोगका कार्यतालिका प्रभावित हुँदा हजारौं परीक्षार्थी मारमा परेका छन् ।
गत चैत्र अन्तिम बुधवार हुनुपर्ने खरदार (प्राविधिक) तर्फका २ वटा विज्ञापन आह्वान आयोगले गर्न सकेको छैन् ।
आयोगका अनुसार प्राविधिक तथा अप्राविधिक गरी सहसचिव तहसम्मका परीक्षा प्रभावित बनेका हुन। त्यस्तै ११ अप्राविधिक र २३ प्राविधिक पदहरूको विज्ञापनका नतिजा प्रकाशन समेत अन्योल बनेको छ। आयोगको संलग्नतामा हुने १६ निकायका परीक्षा अन्योलमा परेका छन्। प्रभावित बनेका निकायहरूमा नेपाल प्रहरी,नेपाली सेना,दुग्ध विकास संस्थान,राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क,दुग्ध विकास संस्थान,नेपाल आयल निगम,बिमा समिति,काठमाडौँ उपतयका खानेपानी लिमिटेड,नेपाल धितो पत्र बोर्ड, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान,वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र,पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र,निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष,राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका संस्थाहरू रहेका छन्।
प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०७:३७ June 9, 2021 २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०७:३७